ဘလော့တခုမှ လိုခြင်သော ပုံ..ဒီဇိုင်း..တွေရဲ့ လင့်..ကုဒ် တွေကိုအလွယ် ရယူနည်း ~ စိုင်းသူ - (နည်းပညာပြန်လည်မျှဝေခြင်း)
2:26 AM ဘလော့ပညာ 1 comment
kaunglay August 9, 2013 at 10:41 AM
ကျ﻿တော်﻿ရဲ့ blog မှာ no post ဘဲပြ﻿နေ တယ်﻿၊post နဲ့ download ရနိုင်﻿မဲ့ LINK. တင်﻿နည်း﻿လေး သိချင်﻿လို့ပါ၊ဖြစ်﻿နိုင်﻿ရင်﻿ MAIL ကတဆင့်﻿ ရှင်းပြ﻿ပေးပါလား?.. အား﻿ပေးလျက်﻿၊
Download link ကိုနှိပ်ပြီး နောက် tab တစ်ခုနဲ့ page တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ငါး စက္ကန့်လောက် စောင့်ပေးလိုက်ပါ။ ညာဘက်ထောင့်မှာ Skip ဆိုတဲ့ button လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ skip ဆိုတဲ့ button ကိုနှိပ်လိုက်ရင် download ဆွဲလိုရတဲ့ page တစ်ခုကျလာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီမှာ download လုပ်နိုင်ပါပြီဗျာ
အကြိုက်ဆုံးဆိုဒ်တွေကို Computer ပေါ်မှာ App Shortc...
ဘလော့ပေါ်တင်တဲ့ပုံတွေ မောက်တင်တာနဲ့ ကာလာလေးနဲ့ လန်း...
ဘလော့ကာ ဆိုဒ်ဘား အတွက် အလှတင်ရန် ( လန်းတယ် )
android ဖုန်းတွေပေါ်မှာ email နှင့် JPEG or PDF do...
android ဖုန်းတွေအတွက် 3D HD wallpaper
WriteProtect လုပ်ပြီး data တွေ ကို usb နဲ့ ပေးကူးမ...
မိမိတို့ ရဲ့desktop ; latop ကနေ tv channels 300...
Driver easy professional free download full versi...
Clean Disk Secrity V8.04 full version
Legendary Heroes Game For Android ( unlimited coin...
SKYPE for Android(28.08.2013)
Frozen Keyboard ကို ကာလာလေးတွေနဲ့သုံးမယ်
Garfield’s Escape Premium HD ကာတွန်းဂိမ်း
Contra Evolution 1.1.2 APK (Android) free game
Bagan Keyboard Pro Version 1.6.8 ထွက်ရှိပါပြီခင်ဗျ...
အားလုံးအတွက် Ubuntu(linux) Creat by KznT
Window7 မှာ Window Password Auto login ပြုလုပ်နည်း...
Window password ကိုသူများပြောင်းလို့ မရအောင်လုပ်နည...
Blog မှာ Copy မရတာကို ရအောင်လုပ်မယ်
Frozen Keyboard Pro ကို ၁၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိ...
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200/I9205 ကို root လုပ်န...
Galaxy Ace Plus GT-S7500 ကို root လုပ်နည်း
Facebook account ကို Skype နဲ့ချိတ်ပြီး သုံးနည်း
hal.dll is missing or corrupt error ကိုဖြေရှင်းနည်...
Rapid Typing Tutor 4.9.4 Beta + Portable(English လ...
samsung galaxy အဆင့် မြင့် ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာစာအမြ...
Whizzo Typing Tutor(မြန်မာလက်ကွက်ကျင့်ရန်)
ဘလော့မှာ FB Chat စာလုံးလှလှလေးတွေ ကုဒ်ယူဖို့ ဇယားေ...
Digital Life ဂျာနယ် အတွဲ ၂ အမှတ် ၁၆(၂၆.၀၈.၂၀၁၃)
Computeractive UK - Issue magazine အားေးဒါင်းလုပ...
MyLanViewer Network/IP Scanner လေးပါခင်ဗျာ
iDeer blu-ray player ကိုသုံးချင်သူများအတွက်
Hidding Object Games တွေ တောင်းဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းအတ...
Youtube Downloader Pro YTD 4.5.2 Fullversion
android ဖုန်းတွေမှာ basebrand နှင့်ime ပျောက်နေ...
windows7အတွက် အကြိုက်ဆုံး loader လေးတခု့
android ဖုန်းတွေအတွက် windows 8 + launcher
Android ဖုန်းတွေ Free Call ခေါ်လို့ရတဲ့ ဆော့ဝဲ(ရှယ်...
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိကြတဲ့samsung galaxy and...
Gmail ကို Offline သုံးမယ်(Chrome)
ကွန်ပျူတာ Crash ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်း ၁၀ ချက်...
SAMSUNG GALAXY NOT 8.0GT.N 5100 ကို ROOT လုပ်နည...
Wise Care 365 Pro 2.74 FULL VERSION
KMSpico v8.5 for Offline Office 2013 and Windows A...
samsung galaxy ace ကို root လုပ်နည်း
ပြည်သူများ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း လိုအပ်ချက် ပြည့်မီစေရန...
GOOGLE PLAY STORE ERROR ဖြေရှင်းနည်း
ဘလော့မှာ total post - total- comment - total page...
Facebook တွင် Security မိတာနည်းအောင်
Sim Card lock ကျသွားတဲ့အခါမျက်စိမလည်အောင်
အင်တာနက်Setting ချိန်နည်း စု့စည်းမှု့
G510 G520 C8813 C8813D တွေသုံးနေကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ...
ANDROID အားလုံးအတွက်UCAM ULTRA CAMERA
Real steel HD Game လေးကို ဒေါင်းလုပ်ယူနိုင်ပါပြီ
Techspace နည်းပညာဂျာနယ် Volume2- Issue 21 (21.08...
ANDROID ဖုန်းတွေမှာ SMS, Mail, Photo,Contacts ! စထ...
အင်တာနက်ဂျာနယ် အတွဲ (၁၄) အမှတ် (၃၂) အားဒေါင်းလုပ်ယ...
ကလစ် ၂ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ Fullversion ဖြစ်သော IDM(6.17...
FACEBOOK 3.6 BUILD 310238 (V3.6) APK FOR ANDROID
android အတွက် webcam အသုံးပြုနည်း
IDM နောက်ဆုံးထွက် 6.17BUILD 8 FULL VERSION ပါခင်ဗျ...
SUPER HIDE IP လေးကိုသုံးပြီးလြုံခုံစိတ်ချစွာအသုံြး...